Jidu သည် ပထမဆုံး အယူအဆ စက်ရုပ် ကိုစတင် ခဲ့သည် - Pandaily
Jidu သည် ပထမဆုံး အယူအဆ စက်ရုပ် ကိုစတင် ခဲ့သည်
Jun 08, 2022, 21:33ညနေ 2022/06/08 23:04:12 Pandaily
Baidu နှင့် Geely တို့၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ပြု ထားသော စမတ် လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီသည် ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် အလွန်အမင်း ပွဲထုတ် ခဲ့သည်၎င်း ၏ပထမဆုံး အယူအဆ စက်ရုပ်-ROBO-01.
ယခုအခါ ကမ္ဘာ ကြီးသည် “လောင်စာဆီ ၁. ၀ ခေတ်” မှ “လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၂. ၀ ခေတ်” သို့ကူးပြောင်း နေပြီး မော်တော်ကား လုပ်ငန်း သည် “စမတ် ကား ၃. ၀ ခေတ်” သို့ ၀ င်ရောက် လာသည်ဟု ကုမ္ပဏီက မှတ်ချက်ချ သည်။
Extreme CEO Xia Yiping က “Smart Car 3.0 ေခတ္ ဟာ Robocars ေခတ္ ပါ။ “ဒီ ခေတ်သစ် မှ အကူးအပြောင်း လူသား တွေကနေ AI မှ မောင်းနှင်မှု ပါဝါ မှ အလှည့် အမှတ်အသား နှင့် robocars နောက်ဆုံး မှာ AI က ဦးဆောင် Self-ထုတ်လုပ် တိုးတက်မှု အောင်မြင် ။ အစွန်းရောက် robocars ခေတ်သစ် စတင် အဖြစ် စမတ် ခရီးသွား, In-car အသိဉာဏ် အကူအညီ နှင့် စမတ် cockpit များအတွက် သုံးစွဲ သူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့် ဆည်း ဖို့ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နေကြပါတယ်။”
West Jean-Won Universe တွင်ကျင်းပသော Yidu ၏ပထမဆုံး အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ်အပျက် စက်ရုပ် နေ့တွင် စက်ရုပ် ကား ကိုပြသခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် Xijiajia ဟုခေါ်သော ပထမဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် လူသား ပိုင်ရှင် သည် Robot 01 နှင့်ဆက်သွယ် ခဲ့သည်။
ဟီ ဂ်ာ ဂ်ာ အမည္ရွိ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ လူသား ပိုင္ရွင္ (ဓာတ္ပံု-က်စ္ ေတာ)
Robo-01 ရဲ႕ 3D bezelless super clear screen ဒီဇိုင္း ဟာ ယာဥ္ေမာင္း ထိုင္ခံု ကေန အဓိက နဲ႔ ေရွ႕ ခရီးသည္ ထိုင္ခံု အထိ ေျပး လႊား ႏိုင္ၿပီး အသံ နဲ႔ ၾကည့္ ႏိုင္တဲ့ အေတြ႕ အၾကံဳ ထို့အပြင် တံခါး လက်ကိုင် များ၊ ပြောင်း ကုန်ပြီ လီဗာ များနှင့် ဘယ်ဘက် နှင့် ညာ ညွှန်ပြ လီဗာ များကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှု ခလုတ် များကိုဖယ်ရှား လိုက်ပြီး လူ နှင့် ယာဉ် အကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု အတွေ့အကြုံ များစွာရှိသည်။
ထို့အပြင် ROBO-01 သည် ပိုမိုအားကောင်း သည့် AI အာရုံခံ နိုင်စွမ်း နှင့်ပိုမို တက်ကြွသော ၀ န်ဆောင်မှု စွမ်းရည် များကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ရှေ့ ပါးပျဉ်း ခေါက် နိုင်သော lidar ၊ နောက်ဘက် တောင်ပံ ကိုအလိုအလျောက် အဝေးထိန်း ခလုတ် ၊ ခေါက် နိုင်သော U-shaped စတီယာ ရင် ဘီး ၊ ဂြိုလ်တု စပီကာ များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိသည့် သုည ဆွဲငင်အား ထိုင်ခုံ များ တပ်ဆင်ထားသည်။
ယာဉ် သည် အသုံးပြု သူ၏ စိတ်ခံစား မှုကို အသိအမှတ်ပြု ရန် နှင့်သူတို့၏ စိတ် ခံစားမှု များကိုဖော်ပြ ခြင်းဖြင့် ပြင်ပ ကမ္ဘာ နှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် နိုင်စွမ်း ရှိသည်။ ၎င်း၏ စက်ရုပ် ရှေ့ ဒီ ဇို င်းသည် အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက် မှုရှိသော AI pixel ရှေ့ မီး များ နှင့်မြင့်မားသော အသိအမှတ်ပြု မှုနှုန်း AI အသံ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် မှုစနစ် ကိုပေါင်းစပ် ထားသဖြင့် မိန့်ခွန်း အသိအမှတ်ပြု ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် သည်ကား ပြင်ပ ရှိ လူ များ၊ ယာဉ် များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အကြား သဘာဝ ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ကိုတည်ဆောက် နိုင်သည်။
၎င်း စနစ်တွင် Nvidia ၏ “dual” Orin X ချစ်ပ် နှင့် Lidar ၂ ခု၊ ၅ မီလီမီတာ လှိုင်း ရေဒါ ၊ Ultrasonic ရေဒါ ၁၂ ခုနှင့် ကင်မရာ ၁၂ ခုအပါအ ၀ င် ပြင်ပ အာရုံခံကိရိယာ ၃၁ ခုပါ ၀ င်သည်။ အလွန်အမင်း လွတ်လပ်စွာ တီထွင်ထားသော SOA မော်တော်ယာဉ်-မောင်းနှင်မှု နည်းပညာ ဗိသုကာ ကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏ dual system သည် redundancy အတွက် autopilot “redundancy” solution ကို ဖန်တီးသည်။ ဒီ ဖြေရှင်းချက်ကို Jidu SIMUCar (Software Integrated Simulation Vehicle) မှာ အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပြီး run ခဲ့ပြီး Jidu ရဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အလိုအလျောက် မောင်းနှင်မှု စနစ်၏ လုံခြုံ မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အလွန်အမင်း သည် Apollo ၏ ကိုယ်ပိုင် မောင်း သူမဲ့ မောင်း သူမဲ့ မောင်း သူမဲ့ မောင်း သူမဲ့ စွမ်းရည်နှင့် လုံခြုံရေး စနစ်များ ကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ သည့် စက်မှု လုပ်ငန်းတွင် တစ်ခုတည်းသော စမတ် ကား ထုတ်လုပ် သူဖြစ်သည်။ အစွန်းရောက် စနစ် များသည် point-to-point အဆင့်မြင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မောင်းနှင်မှု ကိုရရှိ နိုင်ပြီး အဓိက မောင်းနှင်မှု အခြေအနေ သုံးခု ဖြစ်သော အမြန် နှုန်း၊ မြို့ ပြလမ်း များနှင့် ကားရပ်နား ရန်နေရာ များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စမတ် လေယာဉ်မှူး တွင် အော့ ဖ် လိုင်း အသံ လက်ထောက် ၊ မီလီ စက္ ကန် တုန့်ပြန် မှု၊ 3D လူ-စက် ပူးတွဲ မောင်းနှင်မှု မြေ ပုံနှင့် ကား အတွင်း နှင့် အပြင် မြင်ကွင်း အပြည့်အစုံ စသည့် အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
အစွန်းရောက် သည် စတုတ္ထ မျိုးဆက် Snapdragon ကား စင်တာ console ပလက်ဖောင်း-8295 chip ကို, ကားမောင်း ခြင်း, ဂိမ်း ဖျော်ဖြေရေး, အွန်လိုင်း ရုံး အာကာသ နှင့်အခြား မြင်ကွင်း များအတွက် အသုံးပြုသူ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ရန် အဆုံးမဲ့ ပေါင်းစည်း စူပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကြီးမားသော မျက်နှာပြင် 3D တင်ဆက် မှု ပေး စွမ်း သော ပထမ ဦး ဆုံး မိတ်ဆက် ။
Extreme သည် ROBO-01 concept car နှင့် ၉၀% ဆင်တူ မည့် လာမည့် ဆောင်း ဦး ရာသီတွင် ၎င်း ၏ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံ၏ ကန့်သတ်ထားသော ထုတ်ဝေ မှုကို တရားဝင် ဖြန့်ချိ ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထို့အပြင် အလွန်အမင်း သည်ယခုနှစ် ကွမ်ကျိုး အော်တို ပြ ပွဲတွင် ၎င်း ၏ဒုတိယ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ် မှုပုံစံ ၏ဒီဇိုင်း ကိုလည်း ကြေငြာ လိမ့်မည်။
တရုတ် အင်တာနက် ကုမ္ပဏီကြီး Jidu ရဲ့ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းBaiduမော်တော်ကား ထုတ်လုပ်သူ Geely သည် ဒီဇိုင်း အသေးစိတ် အချို့ နှင့်အတူ ၎င်း ၏ပထမဆုံး concept ကား ROBO-01 အတွက် အရောင်း မြှင့်တင်ရေး ပစ္စည်း အသစ်ကို ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။